I-crucible yodongwe yomlilo kwiziko lomlilo
Iimbiza zodongwe zokuvavanya umlilo zikhethwa ngokungenamkhethe kwipakethe yamakhreyithi ngokwereyithi yesampulu.
Ukwenza ngokwezifiso kukwakhona kuyo nayiphi na imfuneko yokubumba, ubungakanani kunye nokunye. Sinokubumba ilogo, imodeli no. okanye ezinye iimpawu emazantsi e-crucible ukuba ifunwa ngumthengi.
I-Crucibles nge-fire assay flux kunye nesampuli ifakwe kwi-furnace ye-fusion. Ilothe ibamba igolide, isilivere kunye neentsimbi ezixabisekileyo ezikwimo enyibilikayo ukuze zenze ialloy yelothe (ngokuqhelekileyo ebizwa ngokuba liqhosha lelothe). I-alloy ekhokelayo ngenxa ye-spectical specificity sink ukuya ngasezantsi kwe-crucible. Isiseko sesinyithi se-oxides kunye ne-ganggue sisabela ngokuguquguquka (i-silica, i-borax, kunye ne-sodium carbonate) ukwenza i-slags (i-silicate okanye i-borate). I-Slags idada kwi-crucible ngenxa yobunzima bayo obuncinci. Ngoko igolide nesilivere yahlula isampuli.
Uluhlu lwethu olusemgangathweni lwe-crucibles clay assay crucibles ukusuka kwi-30g ukuya kwi-65g ngokuqhelekileyo lunokuthi luqhutywe ngamaxesha e-5-ukudubula kwaye ngamanye amaxesha lunokusetyenziswa ngokuphindaphindiweyo ngamaxesha angaphezu kwe-9 kunye nefomula ethile ye-flux. Eli nqaku libonelela abathengi bethu ngezibonelelo ezibalulekileyo zokunciphisa iindleko zokudubula kunye nokunyusa inzuzo. Kwaye singakwazi ukuyila kunye nokubonelela ngeemfuno zomthengi ngamnye kunye neenkcukacha kwimilinganiselo, imilo njalo njalo.
Imibuzo Ebuzwa Rhoqo malunga neCrucible yoDongwe loMlilo
Liling Xing Tai Long Special Special Ceramic Co.,Ltd
i-crucible ye-muffle eziko i-crucible yodongwe kwiziko lomlilo
55g umlilo assay crucible for ukunyibilika-XTL
Ezi zixhobo zokuvavanya umlilo zibonelela ngokukhukuliseka kunye nokuchasana nokuqhekeka phantsi kweemeko zokusebenza ezinzima (ukuya kwi-1300ºC). I-Universal Fire Assay Crucibles zinika ubomi obude, ukudibanisa ngokukhawuleza, isantya sokunyibilika esingaguqukiyo kunye nokuxhathisa ukothuka kwe-thermal.Izinto zokwakha zikumgangatho ophezulu wodongwe oluvutha umlilo kunye nomgangatho ophezulu we-alumina obenza ukuba baxhathise uhlaselo lwe-litharge.